Home » Lahatsoratra farany farany » | » Miverina ve ny Sinoa mpizaha tany? Navoaka ny tatitra Keypoints
| • Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana China • Vaovao Mafana Hong Kong • Vaovao • People • Vaovao Mafana Taiwan • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Vonona sy dodona ny hisidina indray ny mpandeha sinoa.
Namoaka ny “Tatitra isan-taona momba ny fampandrosoana ara-pizahantany any ivelany any Shina 2021” ny Akademia momba ny fizahantany any Shina.
Ny tatitra dia navoakan'ny Dr. Jingsong Yang, Talen'ny Ivon-toeran'ny Fianarana Iraisam-pirenena (ny Ivon-toeram-pikarohana ao Hong Kong, Macao ary Taiwan.)
Tamin'ny taona 2020, nitentina 20.334 tapitrisa ny fitsangatsanganana fizahan-tany any Chine, nidina 86.9% raha oharina tamin'ny 2019. Tamin'ny Febroary 2020, dia nihena be ny isan'ny fitsangatsanganana mivoaka any ivelany ho latsaky ny 600,000 raha 10 tapitrisa mahery tamin'ny Janoary. Nitsahatra tanteraka ny fitetezam-paritra ataon'ny vondrona. Vinavinaina hahatratra 2021 tapitrisa ny fitsangatsanganana mpizahatany hivoaka ho an'ny taona 25.62, fitomboana 27% raha oharina amin'ny taona 2020. Raha oharina amin'ny 100 tapitrisa mahery ny mpandeha mivoaka alohan'ny areti-mifindra, ny fizahan-tany mivoaka any Shina dia mijanona amin'ny ankapobeny.
Nitohy ho toerana ambony indrindra i Azia tamin'ny fitsidihana 95.45% nataon'ireo mpandeha sinoa, arahin'i Eoropa, Amerika, Oseania ary Afrika. Amin'ny ankapobeny, nihena 70% hatramin'ny 95% ny dia mankany amin'ireo kaontinanta ireo, ka i Azia no nihena kely indrindra ary i Oceania no nihena be indrindra. Hong Kong SAR, Macao SAR, ary Sinoa Taipei no nijanona ho toerana be mpitsidika indrindra, izay mahatratra 80% amin'ny fitsidihana.
Ny toerana 15 ambony indrindra dia Macau SAR, Hong Kong SAR, Vietnam, Korea Atsimo, Japon, Thailand, Kambodza, Etazonia, Singapour, Sinoa Taipei, Malezia, Angletera, Aostralia, Kanada ary Indonezia, miaraka amin'ny fihenan'ny 66% hatramin'ny 98%. Nampiseho fahasitranana miharihary ny dia mankany Macau SAR.
Ny fanadihadiana dia mampiseho fa ny fiarovana, ny halavirana fohy ary ny fiarahana no toerana ifantohan'ny dia mivoaka. 82.8% amin'ireo namaly no handeha any amin'ny toerana tsy misy otrikaretina COVID intsony. Ny mpamaly dia mirona kokoa hialana amin'ny toerana feno olona. Ny 81.6% dia manondro fa mandritra ny fotoana kelikely, dia hifidy ny fitsangatsanganana an-trano izy ireo fa tsy ny fandehanana mivoaka. 71.7% no misalasala ny handeha any ivelany amin'ny fiaramanidina noho ny tsy fahatokisana ny fihanaky ny COVID.
Ho an'ny fitsangatsanganana any ivelany, ny ankamaroan'ny mpamaly dia hiantehitra amin'ny media sosialy sy tranokala fitsangatsanganana, ny 25.08% ihany no hampiasa mpandraharaha fitsangatsanganana, izay mampiseho fihenam-bidy 37.79% raha oharina amin'ny taona 2019. fianakaviana ampahany”, ary vitsy kokoa no misafidy ny “dia irery” sy “dia miaraka amin’ny vahiny”. Raha ny faharetan'ny dia, latsaky ny 10% no misafidy mihoatra ny 15 andro ary mihoatra ny 60% ny drafitra mandritra ny 1 hatramin'ny 7 andro, ka ny 50% amin'ireo dia misafidy 4 hatramin'ny 7 andro.
Mbola misy fiantraikany amin'ny valan'aretina maneran-tany ny fizahan-tany any ivelany, ary mbola tsy milamina ny toe-draharaha ao an-toerana na iraisam-pirenena. Amin'ny ho avy, ny fepetra fanaraha-maso ny fahasalamam-bahoaka dia mety ho lasa ara-dalàna, ary ny mpizaha tany Shinoa dia haniry fiarovana sy fiarovana tsara kokoa. Ny indostrian'ny fizahan-tany any ivelany dia mampifanaraka amin'ny fomba vaovao amin'ny alàlan'ny fanavaozana ara-teknolojia sy fanatsarana, ao anatin'izany ny vaksiny, ny fitiliana PCR haingana, ny kaody ara-pahasalamana nomerika, sns. Fanampin'izany, ny 5G, Big Data, AI, sns. izay mety hanampy amin'ny fizahan-tany any ivelany amin'ny ho avy.
Ny tatitra dia nilaza fa ny olom-pirenena Shinoa dia mbola maniry ny handeha hivoaka, tohanan'ny mponina be dia be, ny tanàn-dehibe ary ny toe-karena tsara kokoa. Ny tatitra ihany koa dia mirakitra fizarana mamaritra ny ezaka/fanavaozan'ny indostria amin'ny fifindrana avy amin'ny fizahan-tany ivelany mankany amin'ny fizahan-tany ao an-toerana mba hanomezana ny filan'ny tsena.
Ny fizarana farany amin'ny tatitra dia misy famakafakana manan-danja amin'ny fomba fijery 2022.